Aug 26, 2011 na1:14 PM
Ndakavatarisa kunze asi dambudziko rangu rakawanda neaya ese anogarwa WordPress zvitoro nderekuti iwe unofanirwa kusiya chinhu chekutonga chisingagamuchirwe kwandiri. Kumhanyisa webhusaiti hombe kunoda kuti ndive nekutonga kwakazara pane ese maficha - kusanganisira mapulagi uye kuwana dhatabhesi. Mitengo yavo mapakeji zvakare haina musoro muchokwadi - $100/mwedzi ye250k mapeji ekuona uye 100gb? Ndeipi muganho wekupokana wandaizorova mumavhiki 2-3. Parizvino ndiri kushandisa Media Tembere (uye kuribhadharira yakawanda) - uye kushandisa yega yega 'optimization' chishandiso (cahcing, CDN, nezvimwewo) iripo handikwanise kurodha nguva zvirinani pane 9-10 masekonzi. Pfungwa yandiri kuyedza kutaura ndeyekuti hapana sirivheri kana zvasvika pakuwana WordPress kuti imhanye nekukurumidza. Ndakaedza ose.
Aug 26, 2011 na5:25 PM
Unogona kudzora mativi ese navo, Jonatani. Yedu saiti ine toni yemaitiro uye plugins kuti iite kuti iite zvese zvatinoda. Ini ndinotenda kuti mitengo yacho yakanaka kune avhareji blog blog… munhuwo zvake haazive kugadzirisa maCDN uye caching saka izvi zviri pasi pemutengo iwoyo. BTW: Isu tinoshandisa Mediatemple zvakare ... neCDN uye Cloudflare uye haisi kuita nemazvo sezvatinoda.
Sep 14, 2011 na5:29 PM
Iwe uri kutambira iyo WordPress saiti pane yeMedia Temple's grid server kana yakazvitsaurira virtual server? Ndakanga ndine saiti yakapfava yakagarwa ne (mt) kwemakore 2 pane gidhi uye nguva dzekutakura dzaingotyisa, kuseka kunonoka uye nzvimbo ye admin yaingova marwadzo anorwadza muarse. Ndakataura kuti chiitiko chose chaityisa here?
Ndakaita zvese zvaigoneka pasi pezuva kuti ndigadzirise saiti yangu kunze kwekutenga mudziyo wegridi uye hapana chakashanda. Optimized it with minify, WP Super Cache, etc. Ndakatomboedza kushandisa CloudFlare pane imwe wp yakabatwa saiti asi nguva dzekuremerwa hadzina musoro. 20 seconds kurodha peji remba?
Ndakafunga kufambisa saiti yangu kuHostgator uye nekumhanyisa kuwedzera katatu husiku. Ndichiri kupotsa (mt) control panel iyo inoshamisa asi kumhanya kwesaiti yangu kunokwidza inotaridzika zvakanaka.
Iye zvino ndiri kutenga webhutori itsva zvakare asi panguva ino ini ndichada kuisa multisite nekukwanisa kugamuchira 10 micro masayiti mukati mayo. Ndanga ndakatarisa (mt) yakatsaurirwa chaiyo, WP Engine uye Page.ly. Media Tembere inoratidzika kunge iri nani zvakanyanya uye ini ndakanga ndatopiswa navo pane grid, asi ini ndinoshamisika kana yavo yakatsaurirwa chaiyo ichandipa kukurumidza kukurumidza kwandinoda uye kusununguka kwekushandisa kunouya nemapaneru avo ekutonga.
Sep 14, 2011 na7:09 PM
MT ingori "dhiri" kana iwe uchida muchina usina chaiyo tsigiro yeWordPress. Kana iwe uchida kuita chengetedzo iwe pachako, kurumidza iwe, scalability iwe pachako, CDN iwe pachako (uye ubhadhare iyo).
Uye ipapo pane yakakwirira-kuwanikwa. Zvese zviri zviviri nekuda kwesoftware uye nenyaya dzehardware, imwe-sevha yekumisikidza haigone kuve yakanyanya-inowanikwa senge sumbu.
Semaonero edu, kuyedza kuchengetedza madhora makumi maviri / mo asi kuita zvese izvo zvinhu iwe pachako hakusi kushandisa zvakanaka nguva kana mari. Zviri nyore kwatiri nekuti isu tinobvisa mutengo wezvose izvo pamusoro pevatengi vedu vese; zvakangowanda kuve zvine musoro kune imwe saiti kuita kana usiri TechCrunch.
Sep 14, 2011 na7:38 PM
Thanks Jason. Ndiri kupfura imi varume imwe ruzivo kuburikidza nesaiti yenyu kuitira quote.
Aug 26, 2011 na6:17 PM
Hi Joanathan, ndinonzwisisa kwauri kubva, asi hausati wazviedza zvese kana usati watiedza. 🙂
Iwo miganhu igwara - isu hatidzime saiti yako kana chero chinhu kana iwe ukazvirova, zvinongoreva kuti zvinotidhurira zvakanyanya uye zvinozokudhurira iwe zvakare. Tinogona kutaura nezvazvo.
Takave nevanhu vazhinji vasingakwanise kukwenenzvera kupfuura imwe nzvimbo, asi wozoona kuvandudzwa nesu. Nokuti: http://wpengine.com/our-infrastructure .
Zvakare, isu * tinokupa iwe kutonga pamusoro pemapulagi, kodhi kodhi, uye kuwana dhatabhesi, saka usafunge kuti tichakuvharira kunze!
Pane kudaro, wadii kutipa mukana… fambisa kopi yeblog rako, wozonditumira email (jason pa wpengine) uye ngationei zvatingaite.
9-10 seconds haigamuchirwi. Ini pachangu ndakawana kuchinja kubva kuThesis kuenda kuWoo framework yakaita kuti saiti yangu iite zvishoma. Ndainge ndatunda pa3 seconds and now its slower.
Ndakaona VPS iri nani pane kugovana kugovana uye ndakaendesa akati wandei masaiti kuMT inova gimmick uye kunetseka mumaonero angu pamwe nekudhura zvakanyanya.
Unogona kuwana VPS neCanel yeUSd $ 35 pamwedzi uye yakachipa pamapakeji epagore. Yakachipa zvakare yeVPS nePlesk
Mhoro Brad… Kana usina basa neni kubvunza .. wakawanepi “VPS ine cPanel for usd$35 pamwedzi”
Ndiko kuMT? Iwe unoti wakafambisa akati wandei ipapo asi chii gimmick yavo? Unofara navo here?
Ndiri kuvhiringika nemashoko ako.
Asingazivikanwe, ndinofunga uchaona vanhu ava vakasiyana. Kutanga, une SFTP yekuwana saka iwe unogona kuita shanduko dzaunoda padivi replugin. Sezvo iwe uine yakazara faira yekuwana, unogona kuita chero chaungade ne database. Ini, zvakare, ndiri paMediaTemple uye ndiri kushandisa caching neCDN… asi iwe neni tiri verudzi rusingawanzo. Kana mumwe munhu asinganzwisise nzira yekukwirisa yekumhanyisa peji, WP Injini ndiyo mhinduro yakakwana sezvo vachinetsekana nezvekuita saka haufanire kudaro. Huwandu hwemapeji ekuona uye bandwidth inodarika zvakanyanya izvo avhareji yekambani blogger inoda. Kana iwe waizohaya nyanzvi kuti ikwidze saiti yako uye kugadzirisa CDN, yaizodhura yakawanda, yakawanda.
Aug 26, 2011 na5:01 PM
Zvakanaka ishe webhusaiti yako inoremerwa nekukurumidza.
Aug 26, 2011 na5:14 PM
Kwete - asi zvichadaro!
Aug 26, 2011 na5:16 PM
Chokwadi? Ndaifunga kuti watotama. Kana zvisiri, uri kuita zvakanaka nekumhanya sezvazviri.
Aug 26, 2011 na5:22 PM
Ndakatanga kushandisa Cloudflare - zvitarise, ibasa remahara uye ratora kuremerwa kubva kumaseva edu ekugamuchira paMediatemple. Haisi iyo inokurumidza, asi kumhanya kwese kuri kuita nani nekuda kwayo.
Aug 26, 2011 na5:50 PM
Zvikuru. Ndichatodzitarisa. Sezvineiwo, chandaifarira chimiro cheWPEngine pandakachitarisa kwaisava kumhanya kana kugovera. Yakanga iri 1-tinya nhandare. Zvinotapira sei izvozvo?
Aug 28, 2011 na1:40 PM
Ndinofungidzira kuti chero chinhu chinosanganisira Jason Cohen chichava goridhe rakasimba. Ini handina kumbobvira ndada CodeCollaborator yake, kuve timu yemunhu mumwechete, LOL. Asi, ndanga ndichimutevera uye ndichidzidza huzivi hwake kweanopfuura makore maviri.
Paakatanga kunyora nezveWP Engine, ndakashamiswa. Ehe, anoidzokorora nguva nenguva uye ndozvandapinda nhasi.
Sezvineiwo, ini handisati ndagadzirira WP Engine, zvakadaro, saka ndichave ndichitarisa mukati CloudFlare.
Sep 14, 2011 na5:33 PM
Sekutevera kunhaurirano iyi - ndakapedzisira ndachinja kubata kweAnglotopia.net kuWpengine uye saiti yangu iri kumhanya zvakanyanya. Ndiri kuchengeta sevha yeMT kune mamwe masaiti uko nguva yekuremerwa isiri nyaya asi parizvino Anglotopia ndipo painofanira kunge iri.
Jun 26, 2012 na4:45 AM
inodhura zvakanyanya kune imwe saiti. Ini ndichaenda kune isina kutarisirwa VPS panzvimbo. Ini ndichave neasingagumi madomasi uye caching masisitimu senge xcache.